မိန်းမ တွေဆိုတာ ညတစ်ညရဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုပါ…
အစာအိမ်ဝေဒနာကြောင့် ဆေးရုံရောက်နေတဲ့ ​ဝေဠု​ကျော် ….
အစာအိမ်ဝေဒနာကြောင့် ဆေးရုံရောက်နေတဲ့ ​ဝေဠု​ကျော် ပရဟိတအလုပ်တွေကို နေ့မနား ၊ ညမနားနဲ့ တကယ်လိုအပ်တဲ့ ဒေသတွေကို ကိုယ်တိုင်ဆင်းပြီး အားသွန်ခွန်စိုက် ပြုလုပ်တတ်သူ တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ မင်းသားကြီး ​ဝေဋ္ဌုကျော်ကတော့ အမြဲလိုလို တက်ကြွနေတတ်သူ တစ်ဦးပါ ။ လတ်တလောမှာတော့ ဝေဠု​ကျော်က အစာအိမ်နာနေတာ အတော်ကြာနေပြီမို့ ဆေးရုံတက်ပြီး ဆေးစစ်နေရတဲ့ […]
မသန်စွမ်းဖြစ်သွားတဲ့ အွန်လိုင်းချစ်သူကို မေတ္တာလုံးဝမပျက်တဲ့အမျိုးသား
အလိမ့်အညာတွေ ပေါများနေတဲ့ အွန်လိုင်ခေတ်ကြီးမှာ ထိုင်းနိုင်ငံသူလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ချစ်ခြင်းပုံပြင်တစ်ပုဒ်က စစ်မှန်တဲ့ မေတ္တာတရားတွေရှိနေသးတယ်ဆိုတာကို သက်သေပြနေပါတယ်။ လူမှုကွန်ရက်ကနေပဲ ချစ်သူဖြစ်ခဲ့တဲ့ စုံတွဲလေးဟာ ကံကြမ္မာဆိုးက ၀င်နှောက်ယှက်ခဲပမေဲ့ စစ်မှန်တဲ့ ချစ်ခြင်းနဲ့ ရှေ့ဆက်နေတာကို ApannPyay ပရိသတ်တွေအတွက် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ချင်းမိုင်က အသက် (၃၁)နှစ်အရွယ် အမျိုးသား Narawut […]
သက်ငယ်မုဒိန်း ကျူးလွန်ခံရတဲ့ သမီးလေးအတွက် တရားမျှတမှု ဝိုင်းရှာပေးကြပါအုန်း ….
နေပြည်တော် တဲကုန်းရွာက သက်ငယ်မုဒိန်း ကျူးလွန်ခံရတဲ့ သမီးလေးဆီ အခြေနေလေး သိချင်တာနဲ့ထပ်သွားတော့ သမီးလေးက ဖျားနေတယ် အနွေးထည်လေးဝတ်ပြီး အိမ်ထဲမှာ ထိုင်နေတယ် ကိုယ့်လဲမြင်ရော အားတတ်သရောလေးနဲ့ပြေးဖက်ရှာတယ်😔 ဆေးရုံကပေးလိုက်တဲ့ ၂၈ရက် တိတိသောက်ရတဲ့ဆေးကြောင့် ထင်တယ် အသားလေး ခြောက်သွားတယ် စိတ်မကောင်းစရာလေး ဒီအရွယ်လေးက အဲ့ဆေးတွေသောက်ရတဲ့ အရွယ်လေးလား […]
လူရွေးပွဲမှာ မုဒိန်းကျင့်ပြဖို့ မပြောခဲ့ဘူးလို့ ဆိုတဲ့ ဒါရိုက်တာညိုမင်းလွင် ( ရုပ်သံ)
လူရွေးပွဲမှာ မုဒိန်းကျင့်ပြဖို့ ဘယ်သူ့မှမပြောခဲ့ဘူးလို့ ဆိုတဲ့ ဒါရိုက်တာညိုမင်းလွင် ရုပ်သံ အခုလက်ရှိ ပရိသတ်တွေကြားမှာ စိတ်ဝင်စားမှု ပြင်းထန်နေကြတဲ့ “မြမြ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးက သရုပ်ဆောင်တွေကို ရွေးချယ်ပြီးတဲ့နောက် မကြာခင်မှာ ရိုက်ကူးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့က “မြမြ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအတွက် သရုပ်ဆောင်သစ် ရွေးချယ်ပွဲ ကျင်းပခဲ့ပါတယ် […]
ဗစ်တိုးရီးယားလေးအတွက် ကိုကိုနှင့် ညီညီတို့၏ ဖခင်နှင့်မိခင်ထံသို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ….
ကိုကိုနှင့်ညီညီတို့၏မိခင်နှင့်ဖခင် ဖခင်ကမျက်နှာချင်းမဆိုင်ပဲမိခင်ကသာသောကနှင့်ရင်ဆိုင်နေရတာတွေ့တော့ မိခင်အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိသလိုကြီးမားတဲ့မိခင်မေတ္တာကိုတွေ့ရလို့ စိတ်ထဲမကောင်းပါဘူး။ဒီနေရာမှာကျတော့်အမေအကြောင်းနည်းနည်းပြောချင်ပါတယ်။ကျတော့်အမေငယ်ငယ်ထဲက သားသမီးတွေကိုအကြီးအကျယ်တားမြစ်ထားတာ၂ခုရှိပါတယ်။ တစ်ခုက‘ဆဲတာ’။ဆဲရင်၃ ခုလုပ်ပါတယ်။ပထမကပါးစပ်ကိုအပ်နဲ့ပေါက်တယ်။ဒုတိယကပါးစပ်ဆွဲဟပြီး မီးခြစ်ခြစမီးခြစ်တံပစ်ထည့်တယ်။တတိယကခေါင်းကို စည်ပိုင်းထဲနှစ်ပြီးအပြစ်ပေးတယ်။ နောက်အကြီးအကျယ်တားမြစ်တာတစ်ခုကကိုယ့်ကြောင့်သူတပါးဘဝထိပျက်အောင်လုပ်တာပဲ။အဲ့လိုလုပ်ရင်‘ငါကိုယ်တိုင် ဖမ်းပြီးရဲလက်အပ်မယ်။အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်ငါကိုယ်တိုင်သတ်မယ်’လို့ ပြတ်ပြတ်သားသားပြောခဲ့တဲ့ အမေပါ။တကယ်တမ်းကိုယ်ကအများအတွက်လုပ်ခဲ့တဲ့အခါမှာ ကြုံရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုသူကပိုပြီးခါးစီးခံခဲ့တယ်။ ဒီနေရာမှာကျတော့်အကြောင်းဘာလို့ပြောရသလဲဆိုရင်“လူတစ်ယောက်ရဲ့အသိစိတ်ကိုနောက်လူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝအဖြစ်အပျက်ကပြောင်းလဲပစ်နိုင်လို့ပါ”။ ခုအမရဲ့သား၂ယောက်ကျူးလွန်တယ်လို့ကာယကံရှင်ကလေးလေးပြောလာတော့လူတွေကအမ သား၂ ယောက်ကိုသံသယစိတ်တွေပိုများလာတာပေါ့။အမခုလည်းရင်ဆိုင်ပေးနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဘာတွေဟာအမှန်တရားဖြစ်မလဲဆိုတာအမသိမှာပါ။‘အောင်ကြီး’ ကျူးလွန်လို့‘အောင်ကြီး’ ကိုအပြစ်ပေးတာဟာဘာမှမဖြစ်ပေမယ့်‘အောင်ကြီး’ မကျူးလွန်ပဲအပြစ်ပေးမိရင်အကုန်မိုးကြိုးပစ်ခံကြရမှာပါ။ တကယ်လို့အမသား၂ ယောက်မကျူးလွန်ပဲအပြစ်ပေးခဲ့မိရင်လည်းအကုန်မိုးကြိုးပစ်ခံရမှာပါ။ဥပဒေကစီရင်တာထက်လောက ကစီရင်တာပိုကြောက်စရာကောင်းပါတယ်။ […]
မိန်းမသားတစ်​​ယောက်​အတွက်​ မလုံခြုံ​တော့ဘူးလား? (ရုပ်သံ) …..
ည ၁၀နာရီကျော်က မိတ်ေ​ဆွတစ်ယောက် မုန့်ဟင်းခါး လာစားလို့ ဖုန်းဆက်တော့ အလုပ်ကိစ္စ ပြောဖို့လည်း ရှိတော့ အာရောဂျံ မဂ္ဂဇင်းစာအုပ်ပေးဖို့ အောက်ဆင်းလာတော့ ကားလမ်းကူးဖို့ လုပ်နေတုန်း ကားတစ်စီးလာလို့ လမ်းဘေး ပြန်ရှောင်ပေးတာကိုမှန်တွေ အကုန် ချထားတဲ့ ကားနောက်ခန်းကနေ တစ်ယောက်က ချွတ်ချွတ်ဆိုပြီး နှုတ်ခမ်း ဆူပြတယ်။ ကားကို […]